Wasiir Maxamed Oo Booqasho Uga Bilaabatay Rwanda Iyo Kenya – Goobjoog News
Wasiirka arrimaha dibadda Suudaan Maxamed Axmed ayay booqasho uga bilaabatay wadamada Kenya iyo Rwanda, waxaa uuna la kulmayaa inta uu ku guda jiro booqashada Madaxweynayaasha labada dal.
War Murtiyeed ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Suudaan ayaa lagu sheegay in wasiirka uu hor dhigi doono Madaxweynaha Rwanda Paul Kagame oo ah Madaxa Midowga Afrika iyo Madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta na tii jooyinkii ka soo baxay wada xaajoodkii loo qabtay kooxaha dowladda Koofurta Suudaan.
Magaalo Madaxda Khartoum ayaa Marti-gelisay wadahadallo ku dhaxeeya Kooxaha Koofurta Suudaan, si nabd loogu soo dabaalo dowladdan oo Suudaan ka go’day sanadkii 2011-kii.
Wasaaradda arrimaha dibadda waxaa ay intaas ku dartay inta uu Axmed ku guda jiro booqashadiisa, in ay kulmin doonto sidoo kale “Tallaabooyinka gaarka ah ee soo socda laguna xaqiijinayo nabadda Koofurta Suudaan”.
Wa-saxaafadeedka ka soo baxay Wasaaradda laguma sheegay Maalmaha ay qaadaneyso booqashada Wasiirka, Arabacadii la soo dhaafay, waxaa ay saxiixeen Kooxaha Koofurta Suudaan, qeybtii koowaad ee heshiiska awood qeybsiga jagooyinka iyo midka hantida ee dalkooda, ka dib markii ay saxiixeen 7 bishii July heshiiska ku saabsan arrinta Tartiibaadka Amniga.
Wadahadallada Tartiibaadka Amniga ee Koofurta Suudaan ayaa bilowday 28 June waxaana dowladda u saxiixay heshiiskan Madaxweyne Salva Kiir halka mucaadradkana uu u saxiixay Macahar.
Wasiirkii Waxbarashada Oo Goobjoog Uga Jawaabaya Qaabka Loo Ceyriyay Iyo Hadalkiisa Jaamacadaha
Itoobiya Oo Dhexdhexaadineysa Eritrea Iyo Djibouti
Muqdisho: Maxaa Ka Soo Baxay Booqashada Wasiirka Gashaandhiiga Ingiriiska?